နာဆရီ (မန်စီးတီး/ပြင်သစ်) [ကမ္ဘာကျော် မွတ်စလင် အားကစားသမားများ ကဏ္ဍ] - News @ M-Media
နာဆရီ (မန်စီးတီး/ပြင်သစ်) [ကမ္ဘာကျော် မွတ်စလင် အားကစားသမားများ ကဏ္ဍ]
in ကမ္ဘာကျော်မွတ်စလင် အားကစားသမားများ — March 5, 2013
မတ်လ ၅ ၊ ၂၀၁၃
ကမ္ဘာကျော် မွတ်စလင် အားကစားသမားများ ကဏ္ဍ
အမည်အပြည့်အစုံ ဆာမီရ် နာဆရီ (Samir Nasri)
မွေးသက္ကရာဇ် ၂၆. ၆. ၁၉၈၇
အဖအမည် အဘ်ဒလ်ဟဖိဒ် နာဆရီ (Abdelhafid Nasri)
အမိအမည် အူဝါစီလာ ဘင် စအစ် (Ouassila Ben Saïd)
– ပြစ်သစ်နိုင်ငံ မာဆေလ်းမြို့မြောက်ဘက် ဆင်ခြေဖုံးဒေသတွင်မွေးဖွား
– ငယ်စဉ်ကတည်းက ဘောလုံးကစားခြင်းကို စိတ်ဝင်စားခဲ့
– အသက်ခြောက်နှစ်အရွယ်တွင် La Gavotte Peyret ကလပ်တွင် စတင် ကစားခဲ့
– အသက် ၇ နှစ်အရွယ်တွင် Pennes Mirabeau ကလပ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့
– အဆိုပါကလပ်တွင် ကစားနေစဉ် မာဆေလ်း ဘောလုံးအသင်း၏ ကင်းထောက်မှ တွေ့ရှိခဲ့
– အသက် ၉ နှစ်အရွယ်တွင် ပြင်သစ်ကလပ် မာဆေလ်း အသင်းနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး မာဆေလ်း ဘောလုံးအကယ်ဒမီသို့ တက်ရောက်ခဲ့
– ဘောလုံးစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာခဲ့ပြီး မာဆေးလ် လူငယ်အသင်း၏ အဓိက ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ကာ အသင်းနှင့်အတူ ဆုဖားများစွာ ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့
– ၂၀၀၃-၂၀၀၄ ဘောလုံးရာသီတွင် ၁၈ နှစ်အောက် လူငယ်အသင်းတွင် ပါဝင်ကစားခဲ့
– အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်တွင် မာဆေးလ် အရန်အသင်းနှင့်အတူ စတုတ္ထတန်းတွင်ကစားခဲ့
– ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ဘောလုံးရာသီတွင် အာဆင်နယ်၊ ချယ်ဆီး၊ လီဗာပူး၊ နယူးကာဆယ် စသည့် အသင်းကြီများက ခေါ်ယူရန် စိတ်ဝင်စားလာ
– သို့သော် ၂၀၀၄၊ သြဂုတ်လတွင် မာဆေးလ်အသင်းနှင့် ၃ နှစ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့
– စက်တင်ဘာ၊ ၁၂ ရက် ဆိုးချော့ အသင်းနှင့် ကစားသည့်ပွဲတွင် လူစားဝင်ကစားခဲ့ကာ ပထမဦးပွဲထွက်ခွင့်ရရှိခဲ့
– အောက်တိုဘာ၊ ၁၇ ရက် စိန့် အက်တီယန် အသင်းနှင့် ကစားသည့်ပွဲတွင် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ပွဲချိန်ပြည့် ပါဝင်ကစားခဲ့
– ထိုနှစ်ဆောင်းရာသီနားချိန်အပြီး ပထမဦးဆုံး ပြန်လည်ကစားခဲ့သော လိုင်လီ အသင်းနှင့် ပွဲတွင် မာဆေလ်းအသင်းအတွက် သူ၏ ပထမဦးဆုံးဂိုး သွင်းယူခဲ့
– ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁၆ ရက်နေ့ ဆွစ်ဇလန်ကလပ် BSC Young Boys နှင့်ကစားခဲ့သော ယူအီးအက်ဖ်အေ အင်တာတိုတို ဖလား ပထမအကျော့ယှဉ်ပြိုင်ရာတွင် ပါဝင်ကစားခဲ့ပြီး ဥရောပပြိုင်ပွဲ ပထမဆုံးပွဲထွက်ခွင့် ရရှိခဲ့
– ဒုတိယအကျော့ ယှဉ်ပြိုင်ရာတွင် ဥရောပပြိုင်ပွဲ ပထမဆုံး ဂိုး သွင်းယူခဲ့
– ယူအီးအက်ဖ်အေ အင်တာတိုတိုဖလားကို မာဆေးအသင်းနှင့်အတူ ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့
– မာဆေးအသင်းနှင့် ၂ နှစ် သက်တမ်းတိုးစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့
– ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ဘောလုံးရာသီအပြီးတွင် မာဆေးလ်အသင်းမှာ အမှတ်ပေးပြိုင်ပွဲ ဒုတိယနေရာ ရရှိခဲ့ပြီး နာဆရီမှာလည်း ပြင်သစ်လိဂ်၏ အကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားသမားအဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရ
– မာဆေလ်းအသင်းပရိတ်သတ်များ မဲပေးရွေးချယ်သည့် အသင်း၏ အကောင်းဆုံး ကစားသမားအဖြစ်လည်း သတ်မှတ်ခံခဲ့ရ
– မာဆေလ်းအသင်းတွင် ဘောလုံးရာသီ လေးရာသီကစားပြီးနောက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် အာဆင်နယ်အသင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့
– ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁၁ ရက်နေ့တွင် အာဆင်နယ်အသင်းနှင့် လေးနှစ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့
– ဇူလိုင် ၃၀ ဂျာမန်ကလပ် စတုဂတ်အသင်းနှင့် ခြေစမ်းပွဲတွင် အာဆင်နယ်အသင်းအတွက် ပထမဆုံး ပါဝင်ကစားခဲ့
– သြဂုတ်လ ၁၆ ရက် ၀စ်ဘရွန်းအသင်းနှင့် ကစားသည့် ပရိမီးယားလိဂ်၏ အဖွင့် ပွဲစဉ်တွင် ပွဲထွက်ခဲ့ပြီး ပွဲအစ ၄ မိနစ်အကြာတွင် အာဆင်နယ်အသင်းအတွက် ပထမဆုံး ဂိုး သွင်းယူပေးခဲ့
– သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်တွင် ဟော်လန်ကလပ် တွမ်တီး အသင်းနှင့်ကစားသည့် ချန်ပီယံလိဂ် တတိယအဆင့်၊ ဒုတိယအကျော့ပွဲစဉ်တွင် ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီး ထိုဂိုးမှာ ဥရောပြိုင်ပွဲတွင် အာဆင်နယ်အသင်းအတွက် သူ၏ ပထမဆုံးဂိုးဖြစ်ခဲ့
– ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ဘောလုံးရာသီတွင် ပွဲထွက်ကစားသမားအဖြစ် ၄၄ ပွဲကစားခဲ့ပြီး၊ ၇ ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ကာ၊ ၅ ဂိုး ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့
– ၂၀၀၉ ဇူလိုင်လ အာဆင်နယ်အသင်း၏ ရာသီအကြို ခြေစမ်းပွဲတစ်ခုတွင် ခြေထောက်ကျိုးခဲ့ပြီး ၃ လနီးပါးခန့် အနားယူခဲ့ရ
– ၂၀၁၀ မတ်လ ၉ရက်နေ့တွင် ပေါ်တိုအား ၅ ဂိုး၊ ဂိုးမရှိဖြင့် အနိုင်ရသော ချန်ပီယံလိဂ် ၁၆ သင်းအဆင့် ပွဲစဉ်တွင် တတိယမြောက်ဂိုးကို လှပစွာ သွင်းယူခဲ့
– ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘောလုံးရာသီတွင် နာဆရီသည် ၃၄ ပွဲ ပွဲထွက်ကစားခဲ့ပြီး ၅ ဂိုးသွင်းယူခဲ့ကာ ၅ ဂိုး ဖန်တီးပေးခဲ့
– ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘောလုံးရာသီတွင် အထူးခြေစွမ်းပြခဲ့ပြီး PFA ၏ တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမားဆုနှင့် အကောင်းဆုံး လူငယ်ဘောလုံးသမားဆု ဆန်ကာတင် စာရင်းတွင်ပါဝင်ခဲ့
– ၂၀၁၀ ခုနှစ် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားအဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရ
– အာဆင်နယ်အသင်းတွင်း ၃ ရာသီ ဖြတ်သန်းပြီးနောက် ၂၀၁၁ သြဂုတ်လတွင် မန်ချက်စတာ စီးတီးအသင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့
– ၂၀၁၁၊ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းနှင့် လေးနှစ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့
– သြဂုတ် ၂၈ ရက် တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါးနှင့် ဝေးကွင်းတွင် ကစားရသော ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်တွင် မန်စီးတီးအတွက် ပထမဆုံးပါဝင်ကစားခဲ့
– အောက်တိုဘာ ၁ ရက်နေ့ ဘလန်ဘန်းအသင်းအား ၄ ဂိုး ဂိုးမရှိဖြင့် အနိုင်ရသော ပွဲစဉ်တွင် မန်စီးတီးအသင်းအတွက် သူ၏ ပထမဆုံး ဂိုး သွင်းယူပေးခဲ့
– ၂၀၁၂ မေလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် မန်စီးတီးအသင်းနှင့်အတူ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားအား ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့
နိုင်ငံ့လက်ရွေးစင် ကစားသမား ဘ၀
– ဟာတင် ဘင် အာဖာ၊ ကာရင် ဘန်ဇီမာ၊ ဂျယ်ရမီ မန့်ဇ် တို့ပါဝင်သည့် ၁၉၈၇ ဘောလုံးမျိုးဆက် အုပ်စုတွင်ပါဝင်သူဖြစ်ခဲ့
– ပြင်သစ် လူငယ်အသင်းတိုင်းတွင် ပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့
– ၁၆ နှစ်အောက် ပြင်သစ်လူငယ် အသင်းတွင် နာဆရီ သည် ၁၆ ပွဲ ပွဲထွက်ကစားခဲ့ပြီး ၈ ဂိုး သွင်းယူပေးခဲ့
– ၂၀၀၄ ဥရောပချန်ပီယံရှစ် ၁၇ နှစ်အောက် လူငယ် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင် ပြင်သစ် လူငယ်အသင်းနှင့် အတူ ပါဝင်ကစားခဲ့
– စပိန်အသင်းအား ၂ ဂိုး ၁ ဂိုးဖြင့်အနိုင်ရသည့် ဗိုလ်လုပွဲတွင် အသင်းအတွက် ဒုတိယ ဂိုးကို သွင်းယူပေးခဲ့ပြီး ပြင်သစ်လူငယ် အသင်းနှင့်အတူ ချန်ပီယံ ဖြစ်ခဲ့
– ၁၇ နှစ်အောက်အဆင့်တွင် ပြင်သစ်အသင်း ပထမဆုံး ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်
– ၁၇ နှစ်အောက် ပြစ်သစ်လူငယ်အသင်းတွင် နာဆရီသည် ၁၆ ပွဲ ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး ၆ ဂိုး သွင်းယူပေးခဲ့
– ၁၉ နှစ်အောက်နှင့် ၂၁ နှစ်အောက် ပြင်သစ်လူငယ်အသင်းများတွင်လည်း ပါဝင်ကစားခဲ့
– ၂၀၀၇ မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ပြင်သစ်လက်ရွေးစင်အသင်းကြီးမှ ခေါ်ယူခဲ့
– လက်ရွေးစင် အသင်းတွင် ပါဝင်ခွင့်ရခြင်းကြောင့် နာဆရီက အလွန်ပင်ပျော်ရွှင်မိကြောင်း၊ အလွန်ဂုဏ်ယူမိကြောင်း ဖွင့်ဟခဲ့
– မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ သြစတီးယားနှင့် ကစားသည့် ခြေစမ်းပွဲတွင် လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက် ပထမဦးဆုံး ပွဲထွက်ခွင့်ရ
– ထိုအချိန်တွင် နာဆရီမှာ အသက် ၁၉ နှစ်ရှိပြီဖြစ်
– ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့ ဂျောဂျီယာအသင်းအား ၁ဂိုး ဂိုးမရှိဖြင့် အနိုင်ရရှိသော ယူရို ၂၀၀၈ ခြေစစ်ပွဲတွင် လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက် ပထမဆုံးဂိုး သွင်းယူပေးခဲ့
– သူ၏ ထူးချွန်မှုကြောင့် ယူရို ၂၀၀၈ နောက်ဆုံးအဆင့် ပြိုင်ပွဲဝင်ရန် ရွေးချယ်သည့် ပြင်သစ်အသင်း လူစာရင်းတွင်ပါဝင်ခဲ့
– ၂၀၁၀ ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတွင်မူ ရွေးချယ်ခံရခြင်းမရှိခဲ့
– ၂၀၁၁ မတ်လ ၂၅ ရက် လူဇင်ဘတ်အသင်းအား ၂ ဂိုး ဂိုးမရှိဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် ယူရို ၂၀၁၂ ခြေစစ်ပွဲစဉ်တွင် လက်ရွေးစင်အသင်း၏ အသင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် ပထမဆုံး တာဝန်ယူခဲ့
– ယူအီးအက်ဖ်အေ အင်တာတိုတိုဖလား (၂၀၀၅)
– ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား (၂၀၁၁-၂၀၁၂)
– ကွန်မြူနတီဒိုင်း (၂၀၁၂)
– ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ပြစ်သစ်လိဂ် တနှစ်တာ လူငယ်ကစားသမားဆု
– ၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာလအတွက် ပရီးမီးယားလိဂ် အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆု
– ၂၀၁၀ခုနှစ် ပြစ်သစ်နိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမားဆု
– ၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာလအတွက် အာဆင်နယ်အသင်း၏ အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆု
Tags: famous muslim sports players, famous_muslim_football_player, france, mcity